Lapha futhi kwakukhona sokukhulelwa ngesonto 40. Umama nsuku zonke elinde ekuqaleni izimpi futhi ufuna ngokushesha ngangokunokwenzeka ukubona ingane yami. Nanguya nzima kakhulu ukunyakaza aphefumule.
Nokuthi uzizwa ingane? Isisindo esivamile 3500g, ukuphakama mayelana 50cm. Azikho izimpawu prematurity, ingane kubhekwa ovuthiwe ngokugcwele futhi ngiyijwayele impilo ngaphandle kwesibeletho. Amachibi ukusebenza ngokuzimela futhi ngokungaguquki. Isikhumba akuyona obomvu, futhi pink ngenxa ekuqongeleleni fat ongama. Ezinye izingane ikhanda linoboya, futhi ngezinye izikhathi - lena ikhanda ehloniphekile izinwele. Amasende abafana yajikijela scrotum, labia amantombazane ukufihla ngemuva enkulu. ingane Born ngezwi elikhulu, ezihambayo ezingalweni kanye nasemilenzeni. Zonke uzwakalise ingqondo omkhulu: oncelayo, ematheni, ukuziqonda.
Uma isonto 40 okukhulelwa isidlulile, akufanele sifinyelela iziphetho mayelana nokukhulelwa isikhathi eside, mhlawumbe nje kwenzeke iphutha kulesi sibalo zokukhokha. Ngokuvamile odokotela musa ukuthatha noma yisiphi isinyathelo ngaphambi kwamasonto angu-41, kodwa ngemva mhlawumbe imithi noma ukuhlinzwa.
Kuze kube manje, isayensi ngokunembile engaziwa ethonya ukuqala zomsebenzi. On esondela nokubeletha uthi kokumethemba. Bona simo singenzeka kunoma yimuphi umyalelo, noma kungenzeka ukuthi ingabi ngokuphelele, lapho ngokungazelelwe mbali amanzi noma Kufinyeta njalo uqale. Kodwa, noma kunjalo, kufanele ulalele umzimba wakho njalo lapho sishumayeza amasonto 40 okukhulelwa. Abawandulela lokuzalwa kungathiwani umhlangano esondela nezinyane lembuzi.
Izimpawu lokuzalwa esondelayo emkhathizwe.
1. Kusukela sangasese secrete isikhwehlela yinhlama ezinemishwe ngegazi. Uma kungenjalo, ibizwa ngokuthi i-plug lwamafinyila. Ukuba khona igazi ngokuzikhethela, kungase kube aphuzi kancane, sengathi jellies, inhlama. Cork ihlanganisa wesibeletho, nalapho wesibeletho iqala mncane noma evulekile, kukhona ukwehlukana slime. Kodwa njengoba inqubo ukudalulwa kanye thinning lide kakhulu, tube zandise izingxenye. Qala Kufinyeta kungalindeleka, manje nasesikhathini ngesonto. Kwezinye abesifazane, ukudedelwa isikhwehlela kwenzeka ngesikhathi sokubeletha kuphela. Ngakho focus kakhulu ngalesi sici akudingekile, kusho into eyodwa kuphela - inqubo!
2. 40 Emasontweni onke okukhulelwa lingaphathelaniswa ne dribble yamanzi. Lokhu kungenxa kuvulwa elincane ulwelwesi bubble. Kancane kancane, lo igobolondo likhula, futhi konke sithule. Kodwa-ke kufanele wazise unina, kufanele avakashele obuka wezifo zabesifazane ukuze kutholakale imbangela eqondile.
3. njalo wamathumbu ukunyakaza. Kuyiphutha, uphuzwe ngenxa ukuqunjelwa. Eqinisweni, umama bahlanza umzimba ngokweqile, kanjalo ukukhulula isikhala eyengeziwe ngoba prodvideniya ingane ngokuphuphunyelwa emgudwini wokuzala.
4. Omunye uphawu esondela nokubeletha, uma isikhathi kakade amasonto 40 ukhulelwe - ithoni kwesibeletho. Wayibiza ngokuthi ukuqeqeshwa iziqubu. Umehluko omkhulu kusukela into yangempela - i ukuzwe. Lamafisha, nge ezahlukene zinkathi. Abakwazi kuhlale isikhathi eside, amahora ambalwa, kungenzeka babuthakathaka futhi kancane obonakalayo, kodwa kwezinye izimo eqinile ngempela. Ngokuvamile omama siwathathe ubhekene nempi yangempela bese uya esibhedlela. Ukuqeqesha iziqubu bushelelezi futhi ukuthambisa wesibeletho, ukulungiselela ke ukuthunyelwa.
5. Ukuvela ukhwaliti ubuhlungu emuva, umuzwa ingcindezi kule ndawo imbilapho, amandla adonsela phansi. Lokhu ubuhlungu kufana ukuyifundisa ngokuya esikhathini, kwenzeka ngokuphazima kweso kungalindele muntu. Lesi sici selivela nje ngaphambi kokuzalwa, futhi ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba nabo lonke abawandulela.
amasonto angu-40 bekhulelwe luphela nokubeletha usungaqala nganoma yisiphi isikhathi. Lapho Kufinyeta eqinile njalo noma ukudedelwa kwamanzi, kufanele ngokushesha uye emuva esibhedlela. Ngokushesha umama ukubona ingane yakho!
Kungenzeka yini ukuba isisu ekukhulelweni sekwephuzile
Indlela ukulungiselela amabele akho ngoba ibele ukuze umama nengane ukuze sijabule ndawonye?
Umumo esiswini ngesikhathi sokukhulelwa amantombazane nabafana (isithombe)
Indlela ekhanyisa izinwele zakho ekhaya?
Uphi ukuhlola amehlo akho? Amakheli we "Linzmaster" eMoscow
'Diazolin' izingane ezivela emzimbeni
Dala iholide. Indlela yokwenza njengembali yezimila amabhola